Waqtiga Akhriska: 11 daqiiqo
sahlanaato. Waxaad uma baahna in ay walwal ku saabsan gadashada tigidh wakhti kasta oo aad rabto in aad tareenka a, laakiin waa inaad lahaataa dabacsanaan maadaama aadan boos ku yeelan doonin tareen kasta oo aad rabto.
FIIRO GAAR AH OO MUHIIM AH: Rail Pass waa kaliya qiimo lacageed haddii aad tababarto safarka in ka badan 14 maalmood haddii aad u safarto wax ka yar dhibic si aad u tilmaamto tikidhada tareenka sida waxa Save A tareenka ah waa bixinta waxay bixiyaan qiimo wanaagsan lacagtaada.
Marka dalxiisayaal u yimid inuu France, badankoodu waxay Paris ka dhigaan barta ay ka bilaabaan safarada tareenka ee dalka gudihiisa. Marka laga bilaabo Paris, aad gaari kartid dhow caga kasta oo dalka gudihiisa. Kuwani waa qaar ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee u adeegi ka tareenada PSG.
First-fasalka iyo tigidhada fasalka labaad. Ma jiro farqi badan oo u dhexeeya baabuurta heerka koowaad iyo ta labaad. Si kastaba ha ahaatee, waa aamusan ee fasalka-koowaad, iyo kursiyada hore waa qayb weyn. baabuur-fasalka labaad ayaa sidoo kale si fiican u raaxo. Waxaa xusid mudan in tikidhada heerka koowaad ay ku fadhiyaan 1.5x in ka badan qiimaha fasalka labaad.
Isticmaal Chip & credit card PIN. Si aad u iibsato tigidhka ku ah dukaan tigidh iswada, waxaad u baahan doontaa Chip ah & credit card PIN, si loo hubiyo in aad ogtahay code PIN, inkastoo aan ma ku talinaynaa, maadaama ay aad qaali u tahay.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “The Buuxi Guide Si Travel In France By tareenka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/guide-travel-france-train/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)